I-UNWTO iya eSaudi Arabia ibambe: uNobhala-Jikelele uZurab Pololikasvili kwiNgxaki enkulu?
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iindaba zikaRhulumente » I-UNWTO iya eSaudi Arabia ibambe: uNobhala-Jikelele uZurab Pololikasvili kwiNgxaki enkulu?
IBhodi yezoKhenketho yaseAfrika • Iindaba zeManyano • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zikaRhulumente • iindaba • abantu • Iindaba zaseSaudi Arabia zokuPhula • ISpain Iindaba Eziphambili • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku
Umphathiswa wezokhenketho eSaudi Arabia u-Ahmed Al Khateeb. oyena mntu ushukumisayo kwaye uyagungqisa kwihlabathi lezokhenketho kwihlabathi liphela, ngelixa uNobhala Jikelele we-UNWTO uZurab Pololikasvi angaphangela kungekudala.
Intshukumo yekomkhulu le-UNWTO ibanjiwe, kodwa oku akusiso isiphelo sebali okwangoku.
Ukufuduswa kwekomkhulu le-UNWTO ukusuka eSpain ukuya eSaudi Arabia kwafumana ingqalelo kwi-Nkulumbuso yase-Spain u-Pedro Sánchez kunye no-Nobhala-Jikelele we-UN u-Antonio Guterres.
TInkulumbuso yaseSpain yayinomnxeba kunye neNkosana yaseSaudi Arabia iNkosana uMohammed bin Salman Al Saud, apho intshukumo ye-UNWTO isenokuba sesona sizathu siphambili sokufowuna kwikamva lobudlelwane be-Saudi-Spain.
Okumangalisayo kukuba, u-Antonio Guterres, uNobhala-Jikelele naye wabandakanyeka. Iminyaka yokuqhathwa kwabavoti ngu-Nobhala-Jikelele we-UNWTO uZurab Pololikasvili khange kujongwane nayo, kwaye usahoywa eNew York. Ngoku i-SG ngoku iyabandakanyeka emva kokuxwayiswa ngurhulumente waseSpain.
Ukungenelela kweZizwe eziManyeneyo ekubambeni inyathelo le-UNWTO kube yimpumelelo okwangoku.
ISpain kodwa ngoku inokuthatha isigqibo sokurhoxisa inkxaso yayo kuNobhala-Jikelele uPololikashvili.
Ngokwimithombo yolwazi i ubuqhetseba kwi Ukuphinda kunyulwe ngoJanuwari uZurab Pololikashvili njengoNobhala-Jikelele we-UNWTO yiKomiti eLawulayo ye-UNWTO kuza kuvela. Ngoncedo lweSpain inkxaso yenkcubeko Unobhala-Jikelele ongekho mthethweni angafikelela esiphelweni.
Unyulo kwakhona lweZurab kufuneka luqinisekiswe kwiNdibano Jikelele yaseMorocco ngaphambi kokuphela konyaka. AyisiyiSpain kuphela, kodwa amanye amazwe amaninzi kwihlabathi anokuhamba kwaye kufuneka aye ngokuchasene nokuqinisekiswa kwakhona kweZurab kwikota yakhe yesibini, kwaye alunamsebenzi kunyulo luka-2018.
eTurboNews ruxele ngokucacileyo ukuba uNobhala-Jikelele we-UNWTO akazange anyulwe ngokufanelekileyo nangokwasemthethweni kwixesha lakhe langoku le-2018.
Ukuhanjiswa kweNdlunkulu ye-UNWTO ukuya eSaudi Arabia
Nangona intshukumo yayingekasenzi isicelo esisemthethweni ngabakwaSaudis, ayizange ibhalwe ngokubhaliweyo kuRhulumente waseSpain, okanye kwi-UNTWO, eSaudi Arabia babandakanyeka kwaye babandakanyeka ngokuphandle ekufumaneni eli nyathelo.
Kubonakala ukuba uZurab Pololikashvili wayeqinisekile nge-Saudi Arabia ngenkxaso yakhe. Uye waqinisekisa nenkxaso yakhe eSpain. IiTweets ezithunyelwe nguZurab zibonisa inkxaso yakhe eSpain zacinywa ukuze ziphambanise ukuma kwakhe kabini ngalo mbandela.
eTurboNews ifikelele kubaphathiswa abaninzi bezokhenketho kwihlabathi liphela. Bonke bavumile ukuba baya kuvota ngokufudukela eSaudi Arabia, kwaye bayayixabisa inkxaso yaseSaudi Arabia abayinike ukhenketho lwehlabathi.
eTurboNews Ukuncokola ngokuthe ngqo nangaphandle kwerekhodi nabaphathiswa, izixhobo zoncedo kunye namanye amagosa kuqinisekisile ngokucacileyo inkxaso enkulu yevoti enjalo.
Ikwaqinisekisile inqanaba eliphezulu lamalungu angamalungu oxinzelelo kunye ne-UNWTO yangoku.
Ngenxa yongenelelo lweZizwe eziManyeneyo, eli nyathelo le-HQ lisenokuba limisiwe okwangoku, kodwa uthethathethwano kunye nengxoxo malunga noku kubonakala ngathi kuyaqhubeka.
Sinokulindela ukuba impembelelo yase-Saudi Arabia kunye namandla ezemali kukhenketho lwehlabathi olukhuselekileyo luza kuqhubeka. Ngoku lithuba lokuba i-UNWTO entsha yomelele, uhambo olomeleleyo kwihlabathi liphela, kunye nomzi mveliso wokhenketho ukuze uphume kule ngxaki ikhoyo ngoku.
Nge-Saudi Arabia ebandakanyekayo kuye kwakho ithemba kumazwe amaninzi axhomekeke kukhenketho ngamaxesha exesha elimnyama.
ISaudi Arabia inokuba nobulumko bokuyisombulula le ngxaki kunye neqabane laseSpain. Mhlawumbi omabini la mazwe ngokudibeneyo angadlala indima ebalulekileyo ekubuyiseni ukubaluleka, ukuma, kunye nefuthe kuMbutho wezoKhenketho weHlabathi kufuneka ukhokele eli candelo kubhubhane.
UMaría Reyes UMaroto Illera (owazalwa nge-19 ngoDisemba 1973) ngu-Mphathiswa Wezorhwebo, Wezorhwebo, noKhenketho kurhulumente we-Nkulumbuso uPedro Sánchez ukusukela nge-2018.
Umphathiswa uMaroto ubonwe njengobuthathaka eSpain. Umphathiswa Wezokhenketho eSpain uReyes Maroto, ethetha neCanal Sur Radio ngoMvulo, ucebise ukuba ukuqhuma kwentaba-mlilo eLa Palma yinto enokubakhenketha, sikhuthaza iindwendwe ukuba zize.
Namhlanje iLava evela kwintaba-mlilo eLa Palma ifike elwandle. Eyona nto ixhalabisayo kwabasemagunyeni ngoku ngamafu anetyhefu anokufikelela kwisiQithi seCanary, esenziwe ngonxibelelwano phakathi kwelitye elinyibilikisiweyo nolwandle.
Ubambiswano lokuphumelela / lokuphumelela kunye ne-Saudi Arabia ngokuqinisekileyo luya kuphakamisa ibha kumphathiswa wezokhenketho waseSpain.
Yintoni eya kuthatha ukuthatha i-UNWTO?
Iivoti ezili-106 beziya kufuneka ukwamkelwa kwentshukumo yekomkhulu. Ngoku ka eTurboNews imithombo, kufutshane nama-90% ezi voti sele zikhuselekile. Kubekho inkxaso enkulu evela eAfrika, kwilizwe lama-Arabhu, kodwa nakwiCaribbean, nakwamanye amazwe aseYurophu.
Kutheni iSaudi Arabia?
SiAudi Arabia kwisiCwangciso soBuchule se-2030 sinokhenketho phakathi kwezinto ezintathu eziphambili.
INkosana uCrown u-Mohamed Bin Salman ucebise ukuba ilizwe ihamba ukusuka kwi-1% yegalelo lokhenketho kwi-GDP yesizwe ukuya kwi-10% kwisicwangciso esiya kude kube ngu-2030.
Esi sicwangciso senziwa nguMphathiswa Wezokhenketho wase-Saudi Ahmed Ahmed Khateeb.
Phakathi ku-Septemba, uRhulumente waseSpain waququzelela utyelelo kwikomkhulu le-UNWTO elizayo eMadrid, ePalacio de Congresos de La Castellana.
UScretary-General Pololikashvili wayzimase olu tyelelo kodwa kamva wasinda kwinkomfa noonondaba eyayicwangciselwe abaphathiswa uReyes Maroto noJosé Manuel Albares. Khange azikhathaze ngokuya kwimithombo yeendaba okanye aphike amarhe malunga notshintsho kwikomkhulu kunye nenkxaso yakhe eRiyadh
Ngelo xesha urhulumente waseSpain wagqiba ekubeni aye ngqo kwi-UN.
Kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo, i-UNWTO iququzelele iqonga kwilizwe loMzantsi Afrika ukuba lixoxe ngokucebiseka kokwenza uphawu lobumbano lwezokhenketho kulawo mazwe.
Abameli abavela kumazwe angama-47 ase-Afrika bazimase le ntlanganiso iintsuku ezintathu. “Apho unobhala-jikelele wakwazi ukuthetha ngasese nabo bonke, kwaye engenamangqina avela kwamanye amazwekazi.
Imali i-Saudi Arabia eyayizimisele ukuyifaka ekusebenzeni yayiya kwenza kakuhle kuwo onke loo mazwe okuhamba kunye neeprojekthi zokhenketho.
Ubudlelwane phakathi kweSpain kunye ne-UNWTO abuzange bubalasele kodwa bahlonipheke, ngokwengxelo kwimithombo yeendaba zaseSpain. "I-Spain ke yona ivotele uZurab ngokuchasene nolunye ulonyulo oluquka usekela kanobhala waseSpain."
Inyani yokuba nekomkhulu le-UNWTO ayenzi iSpain ibe likomkhulu lehlabathi lezokhenketho, ngokuchasene noko abanye bafuna ukukubona.
"Urhulumente waseSpain akazi ukuba ityala eliyikomkhulu lihlawulwa ngokuzenzekelayo inyanga nenyanga kwaye akukho mntu ufumanisa ngalo ngaphandle kwegosa eligunyazisa ukutshintshelwa kwebhanki, nto leyo ezenzekelayo." ISpain ihlawula ikomkhulu le-UNWTO. Konke oku kuxabisa iSpain malunga ne-2 yezigidi zeerandi ngonyaka.
The Unobhala Jikelele we-UNWTO uyabiza ngokufanayo ne-International Labour Organisation (ILO) kunye noMlawuli-Jikelele weNkqubo yoPhuhliso lweZizwe eziManyeneyo (i-UNDP): $ 20,000 ngenyanga ngeentlawulo ezili-12 zenyanga = $ 240,000. Ukwafumana i-40,000 zamawaka ngonyaka ngezindlu kunye nemoto kunye nomqhubi. Unobhala-jikelele uhlawulwa yi-UNWTO, hayi iSpain.
Oko ilizwe ngalinye lihlawula ngokuba lilungu le-UNWTO kuxhomekeke kwi-GDP, kubemi, nakwiindlela zokupheka zabakhenkethi ezisebenzayo. Eso sixa asinakudlula kwi-5% yohlahlo-lwabiwo mali lombutho.
Amazwe ahlawula kakhulu yiFrance, China, Japhan, Jemani, ne Spain, enegalelo elimalunga nama-357,000 euros ngonyaka. Abo bahlawula ubuncinci yiSeychelles kunye neSamoa, ngentlawulo eyi-16,700 euros ngonyaka.
I-UNWTO izisa ixabiso elincinci kakhulu kumzi mveliso wezokhenketho nakwiindawo eziya kuzo. Kugxilwe ngokungalunganga, ngaphandle kohlahlo-lwabiwo mali -12 yezigidi zeedola ngonyaka, apho i-60% iya kwimivuzo-, namagosa atyunjwe ngamazwe ayo. Urhwaphilizo lwangaphakathi kunye nokuma kunye nezinto ezindala ezingasasebenziyo bezisoloko zingumba.
I-UNWTO okwangoku inayo Amalungu e-159. IZizwe eziManyeneyo zinamalungu elizwe ali-193.
I-United States yashiya i-UNWTO ngo-1995, iBelgium ngo-1997, i-United Kingdom ngo-2009, iCanada ngo-2012, ne-Australia ngo-2014.
Ukungabikho kwe-Ireland, iSipro, iNew Zealand, iLuxembourg kunye nawo onke amazwe aseNordic: i-Iceland, iNorway, iSweden, iFinland neDenmark, kunye namazwe amabini aseBaltic, i-Estonia neLithuania zenza i-UNWTO ibe yintlangano ebuthathaka.
Kucacile umkhombandlela omtsha we-UNWTO ubalulekile kule arhente inxulumene ne-UN ukuze iphile.
Ukuza kuthi ga ngoku i-Saudi Arabia iphendulile I-UNWTO kwaye uKhenketho lweHlabathi alufani nelinye ilizwe emhlabeni. Kuya kubakho inyathelo elilandelayo, ngokuqinisekileyo.